Android 8.0/8.1 Oreo Google Apps Installation – Xiaomi Guide
MIUI 9.5 ကို update လုပ်ရင်း Android Version ပါ Update ဖြစ်လို့ 8.0/8.1 တွေကို ရောက်သွားတဲ့အခါ ( Mi6, Mi Mix2 တို့လိုပေါ့ ) အရင်သုံးနေတဲ့ Google app တွေ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ Android version API မတူတာတွေကြောင့်ပါ။ အရင်အဟောင်းတွေသုံးနေမိရင် app တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်လာတတ်တာက..
Freeze when checking app updates
Apps FC (Force close)
Rapid bug report popping
.. စတာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲသည်အတွက် Android Oreo အတွက် အဆင်ပြေမယ့် Google app တွေသွင်းပေးပါ။ ပြိးရင် ကိုယ်သုံးနေတဲ့ apps တွေကိုလည်း Play Store ထဲမှာ Update လုပ်ပေးပါ။ သွင်းဖို့ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ အရင်ဆုံး အဟောင်းတွေ အကုန်ဖျက်ထုတ်ရပါမယ်။ Settings –> Apps ထဲမှာ Google နဲ့စတာတွေ ရှာဖျက်ပါ။ ခြောက်ခုလောက်တော့ရှိပါမယ်။
MIUI 9.5 မှာ Settings –> Apps ထဲမှာ apps တွေ အလွယ်ရှာနိုင်ဖို့၊ အကုန်ပေါ်အောင်လုပ်ဖို့ အောက်ပါပုံလေးတွေအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးမှ ရှာပါ။ သူ့ Default က recently access လုပ်တဲ့ app တွေလောက်ပဲပြပေးပါတယ်။
အထက်ပါပုံနှစ်ခုအတိုင်း လုပ်ပြီးရင်တော့ Apps တွေလဲ အကုန်ပေါ်လာမယ်။ နာမည်အစီအစဉ်အတိုင်းလဲ ကြည့်လို့လွယ်သွားပါမယ်။ အဲသည်အခါမှ Google နဲ့စတာတွေ အကုန်ဖျက်ထုတ်ပစ်ပါ။
ပထမတစ်နည်းအနေနဲ့ Google Installer apk လေးသုံးပြီးထည့်သွင်းတာပါ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းနမူနာအနေနဲ့ သည် post [ –> Google Apps Install (MIUI 8,9) မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးသွားရင် ဖွင့်သုံးတာမလုပ်သေးပဲ ဖုန်းကို Reboot လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ apk ခြောက်ခု အစဉ်လိုက်ထည့်သွားတာပါ။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ link က archive ကို download လုပ်၊ ဖြည်ပြီး Folder ထဲမှာ ရလာတဲ့ apk လေးကို တစ်ခုချင်းစီ အစဉ်တိုင်း install ပေးသွားပါ။ အစဉ်လိုက်ဖြစ်အောင် ရှေ့ဆုံးမှာ 01, 02 စသည်ဖြင့် နံပါတ်လေးတွေ တပ်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ဆုံး နံပါတ်ခြောက်မှာတော့ ကိုယ့်ဖုန်း Android 8.0 ဆို 8.0 အတွက်ဟာထည့်ပါ။ 8.1 ဆို 8.1 အတွက်ဟာထည့်သွင်းပါ။
Google Apps For Android Oreo
ခြောက်ခုလုံး ထည့်သွင်းပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို Reboot လုပ်လိုက်ပါ။ Play Store ကနေ app တွေ download တိုင်းလဲ Mobile Data နဲ့အဆင်ပြေနေစေဖို့ အောက်ပါပုံအတိုင်းလဲ Downloads app Settings ထဲပြင်ဆင်ပေးထားပါ။ ပြီးရင် Google Play Store ဖွင့်ပြီး Google account ထည့်တာ လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Google Account ထည့်ပြီးလို့ Google Play Store ပွင့်လာရင် ဘာ app မှ download မလုပ်သေးပဲသည်တိုင်းဖွင့်ထားပါ။ Google app တွေ Update ဖို့လိုရင် သူ့ဟာသူ လုပ်သွားပေးနေပါလိမ့်မယ်။ မိမိတို့ဖက်မှာ Data limit တွေ Data Restriction တွေ လိုက်ကလိထားတာမလုပ်ရင် သည်နေရာ ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ပြီးရင် Play Store settings ထဲမှာ Play Store ရော Up to date ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာ စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Play Store Version နေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင် ပြပေးပါတယ်။ မဖြစ်ရင် အလိုလိုလုပ်ပေးနေမှာပါ။ App တွေ download လုပ်ခိုင်းလို့ Download Pending … ပေါ်နေတာမျိုးက Google apps တွေ background မှာ လိုအပ်လို့ update လုပ်နေတာတွေ မပြီးသေးချိန်မို့ပါ။ အချိန်ခဏစောင့်ပေးလိုက်ရင် သည်ကိစ္စအဆင်ပြေပါတယ်။
MIUI Global Forum မှာတွေ့တဲ့ posts တွေထဲကနေ အဆင်ပြေသလို idea လေးတွေ တွဲစပ်ဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ All Credits to Original Content Writers…. 🙂